PressReader - Eyethu Baywatch: 2017-11-29 - Ku­vulwe isikali sez­i­moto eTeza
Ku­vulwe isikali sez­i­moto eTeza
Eyethu Baywatch - 2017-11-29 - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu
KUTHELA izith­elo ez­inhle ukusebenza kwe­sikali sez­i­moto esisendaweni yaseTeza emg­waqeni onguthela wayeka u-N2, njen­goba lomg­waqo uset­shen­ziswa iz­imoto, ikakhulu ezith­wala im­pahla nokuy­i­zona ezi­dala kakhulu izin­gozi.
Ongumphathi wal­en­dawo uMnuz. Sizwe Dlamini uc­haze lendawo njenge­zoba ne­sandla esikhulu ekun­ci­phiseni izin­gozi, njen­goba ih­lale imatasa ngenxa yokuthi, iz­imoto eziningi eziseben­zisa lomg­waqo ziya­siza­kala ngoba un­genelela kalula ech­webeni lase-Richards Bay.
Okunye oku­jab­u­lisayo ngal­en­dawo ukuthi ibuye ibe nen­dawo lapho kuhlolwa khona iz­imoto ezinkulu ukuthi, zisaku­lun­gele yini ukuqhubeka no­hambo, kuphinde futhi kube nen­dawo lapho ase­bekhathele be­phu­mula khona, ukuze bak­wazi ukuthi babe ses­i­meni es­i­fanele uma sek­u­fanele baqhubeke nokuhamba,’ kuc­haza uDlamini.
Basazobam­bisana no­hu­lu­meni ukuthi ban­dise izin­dawo zoku­phu­mula eziphep­hile, ku­lan­dela ukuthi azik­abikhona ezanele eziphep­hile, njen­goba ezin­daweni eziko-Richards Bay abashayeli abaningi, be­bekhala ngob­ugebengu, okuy­into ebaqhatha nabaqashi ngenxa yok­we­biwa kwez­im­pahla.
Ku­len­dawo kuphinde futhi kuhlolwe nam­ab­hasi ukuthi, alay­isha ngendlela efanele yini, nokuthi as­es­i­meni es­i­fanele yini, njen­goba eth­wala abag­i­beli, ok­u­fanele ukuthi bafike ezin­daweni abaya ku­zona bephep­hile.
Banohlelo abal­wen­zayo mayelana nam­ab­hasi, okuthi uma elay­ishile ngok­we­qile an­gavun­yelwa ukuthi aqhubeke no­hambo, kuze kube kuthintwa abanikazi bawo ukuthi bakhiphe amanye am­ab­hasi, azolekelela,’ kuqhuba uDlamini.
Uthe lendawo kulin­deleke ukuthi ithele izith­elo ez­i­zo­jab­u­lisa uhu­lu­meni, ngokun­ci­phisa izin­gozi, njen­goba seku­fike isikhathi sama­holide, noku­vamise ukuthi imigwaqo em­i­ningi ibe matasa, kwazise iningi li­zobe lithatha izindlela ezahlukene. New weigh­bridge at Teza opened
Iy­ona lena in­dawo lapho kukalwa khona iz­imoto eTeza ehlale njalo imatasa uku­lawula ukuhamba kwez­i­moto ezinkulu
Kuban­jena ke uma sekuhlolwa imoto enkulu ukuthi is­es­i­meni es­i­fanele yini sokuba semg­waqeni